Ather 340 – 🛵 လျှပ်စစ် Scooter 2020
အဆိုပါ Ather 340 E-Scooter startup ကနေတစ်ခုဆန်းသစ်နှင့်ဖြတ်တောက်အစွန်းလျှပ်စစ် Scooter ဖြစ်ပါတယ် Ather စွမ်းအင် အိန္ဒိယကနေ။ အဆိုပါ startup ကြီးတွေအိန္ဒိယနည်းပညာကုမ္ပဏီများကငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်။
အဆိုပါ Ather စီးရီး Scooter က, 340 နှစ်ခုမော်ဒယ်များအတွက်ရရှိနိုင်နှင့် 450. အဆိုပါ Ather 340 အောက်ကုန်ကျမော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးမော်ဒယ်များပြင်ပကနေနီးပါးတူညီကြည့်ရှုပါ။
အဆိုပါ Ather 340 70km / h နဲ့ 5.1 စက္ကန့်အတွင်း 0-40km တစ်ခုအရှိန်၏ထိပ်တန်းမြန်နှုန်းကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့်အစွမ်းထက် 4.400 ဝပ်လျှပ်စစ်မော်တာရှိပါတယ်။
အဆိုပါ Scooter 60km ၏အကွာအဝေးကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့်လီသီယမ်ဘက်ထရီရှိပါတယ်။ အိမ် charger ကိုအသုံးပြုပြီးတာဝန်ခံအချိန်4နာရီနှင့်ဘက်ထရီ 1 နာရီအတွက် 80% များအတွက်တရားစွဲဆိုနိုင်ပါသည်တစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်းအားသွင်း အသုံးပြု. ။ ဘက်ထရီ 3-4 နှစ်သို့မဟုတ် 50,000km များအတွက် rated ဖြစ်ပါတယ်။
Ather3နှစ်ဘက်ထရီအပေါ်န့်အသတ်မိုင်အကွာအဝေးအာမခံပေးသည်။
Ather ရုံ Scooter ပေးမထားဘူးဒါပေမယ့်လည်းတစ်ဦးဆန်းသစ်အားသွင်းအခြေခံအဆောက်အအုံပေးပါသည်။ တက်စလာကဲ့သို့ပင်ကြောင့်အသုံးပြုသူများကိုတစ်မိနစ်လျှင် 1km တစ်မှုနှုန်းမှာဘက်ထရီအားသွင်းနိုင်မည့်အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းဘူတာပေးထားပါတယ်။ Ather အိန္ဒိယထဲမှာရဲ့အသုံးပြုသူများအတွက်အခမဲ့အားသွင်းပေးထားပါတယ်။
အဆိုပါ Scooter ကျင်းရေကိုမောင်းဖို့ Scooter ကို enable တံ့သော IP67 ရေနှင့်မြေမှုန့်အထောက်အထားဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Scooter အများဆုံးဓာတ်ဆီဆိုင်ကယ်ကျရှုံးလိမ့်မယ်နေချိန်မှာရေကြီးမှုနှင့်မုန်တိုင်းကာလအတွင်းကားမောင်းဆက်လက် enable ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ Scooter မြို့အသွားအလာ၌ကြီးသောကိုင်တွယ်နှင့်သွက်လက်နှင့်အတူ Scooter ထောက်ပံ့ပေးသောဆွဲငင်အားတစ်ခုအနိမ့်စင်တာရှိပါတယ်။
အဆိုပါ Scooter ဖြစ်သော CBS ဘရိတ်နည်းပညာအကူအညီပေးရန်နှင့်အတူရှေ့နှင့်နောက် disc ကိုဘရိတ်ရှိပါတယ်။
အဆိုပါ Scooter လွယ်ကူသောကားပါကင်တစ်ခုပြောင်းပြန်ဂီယာရှိပါတယ်။
အဆိုပါ Ather 340 ထိုကဲ့သို့သောအမြန်နှုန်းနှင့်ဘက်ထရီပြည်နယ်အဖြစ် Scooter applications များနှင့်သတင်းအချက်အလက်မှ access များအတွက်စမတ်ဖုန်းကိုချိတ်ဆက်တဲ့စစ်မှန်တဲ့စမတ် Scooter ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Scooter ထိုကဲ့သို့သောအမြန်နှုန်းနှင့်ဘက်ထရီအခြေအနေနှင့်အညွှန်းအပါအဝင်အများအပြား Scooter apps များအဖြစ်ဝင်ရောက်ခွင့်သတင်းအချက်အလက်ထောက်ပံ့ပေးသော 3G, GPS Bluetooth နှင့်ဝိုင်ဖိုင်ချိတ်ဆက်မှုနှင့်အတူ IP65 ရေစိုခံတစ်ဦး7“ အပြန်အလှန်ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ဒိုင်ခွက်, ရှိပါတယ်။
အဆိုပါ Scooter အများအပြားအရောင်ရရှိနိုင်ပါသည်နှင့်များစွာသောဆက်စပ်ပစ္စည်းပေးထားပါတယ်။